Qaadista Roller-ka Tapered, Kubbada Dhasha Deep Groove, Barkinta Barkinta - Xinri
Waxaanu samaynay kormeer adag oo ku saabsan qayb kasta iyo xajin, isku day in aan wax dhibaato ah oo tayo leh gacanta macaamiisha.Akhri wax dheeraad ah
7X24 saacadood telefoon ama taageero tignoolajiyada khadka tooska ah oo bilaash ah. OEM/adeegga gaarka ah waa la soo dhaweynayaa.
Iibka tooska ah ee warshadda, ma jiro farqi qiimaha dhexdhexaadka ah.Akhri wax dheeraad ah
Hal qayb oo ka mid ah Linqing Xinri Precision Bearing Co., Ltd
Linqing XINRI Precision bearing Co., Ltd. waa shirkad ku takhasustay rullaluistemadka duuban, rullaluistemadka cylindrical, kubbadda jeexdin qoto dheer, barkin block sida, wheel xumbo iyo inch wax soo saarka aan caadiga ahayn ganacsiyada. Shirkaddu waxay leedahay aag guud oo ka badan 2 milyan oo cagood oo laba jibbaaran, shaqaale hadda jira 500 qof, wuxuu leeyahay dhammaan noocyada qalabka biraha horumarsan ee ka badan unugyada 360, qalabka tijaabinta in ka badan cutubyada 240, Hadda waxaan wali raadineynaa wakiilka astaantayada XRL. Adduunka oo dhan, haddii aad wax xiiso u leedahay, fadlan nala soo xiriir si toos ah.
WAXAAN NAHAY CAALAMKA
XRL waxaa horeyba loogu iibiyay in ka badan 120 waddan oo adduunka ah. Hadday tahay beeraha, wax soo saarka dharka, macdanta, daabacaadda codsiyada kala duwan ee garoomada diyaaradaha, nidaamyada qaboojiyaha, qalabka gudbinta, xarunta tamarta maraakiibta, toy ama qalabka caafimaadka, Baabuurka, XRL wax aan ka yarayn qaybta dhamaadka sare ee suuqa ugu fiican .
Qiimaha Jumlada ee Warshada Shiinaha Shiinaha oo Tayo Wanaagsan...
Warshada OEM ee Shiinaha 6203 Heerkulka Sare ee Sare ...
Shiinaha Qiimaha jaban ee Shiinaha Kubbada Kubbada Yar...
Qiimaha jaban ee Warshada Gacan Spinner Jumlad...
XRL waxay iibisay in ka badan 120 waddan
Iibka sannadlaha ah ee caalamiga ah oo ka badan 150 milyan oo doolar
Awood-soo-saarka sannadlaha ah ee gudaha ayaa ka badan 700 milyan unug
Waxaan helnay Shahaadada Nidaamka Maareynta Tayada.
Waa maxay Waxaan Samaynaa
Xawaare sare heerkulka sare
Nolosha adeeg oo dheer fududahay in la ilaaliyo
Karaa la habeeyo
Maxaa nala macaamilaya?
Halkee laga dhoofiyaa?
Waxaan bixinaa xirmo kala duwan oo ay ka mid yihiin rullaluistuyada Tapered, Kubbada jeexjeexa qoto dheer, xadhkaha barkimada, rullalulatada cylindrical, rullaluistuyada wareegsan, xadhkaha wheel hub iyo kuwa kale. Oo waxay u dhaxaysaa biraha yar yar ee dhexroorka gudaha ah ee 20mm ilaa dabo waaweyn oo leh dhexroorka dibadda 500mm. Marka lagu daro jaangooyooyinka caadiga ah, waxaan sidoo kale soo saareynaa xargaha aan caadiga ahayn.
Waxa intaa dheer, waxaanu sidoo kale soo saara Russia LADA, TZA, VPZ, SPZ, VBF iyo KG, iyo kuwa kale. Dhanka kale, waxaan sidoo kale bixin karnaa adeegga OEM.
1. Dhammaan hababka wax soo saarka, sida foornada, leexinta, daaweynta kulaylka, shiididda, isu-ururinta iyo baakadaha, ayaa lagu dhammeeyaa wax-soo-saarkayaga. Taasi waa sababta XRL Bearing ay ku siin karto kubad sax ah iyo rullaluley qiimayaasha ugu hooseeya ee suurtogalka ah waxayna la kulmi kartaa keenista waqtiga loogu talagalay.
2. Sida ISO9001: 2000 saaraha shahaadaysan, waxaanu samaynay nidaamka baafinta alaabta. Ka sokow, XRL Co., waxay leedahay koox tignoolajiyadeed xoog leh oo leh injineer Japan ah si ay u xalliyaan dhibaatooyin kala duwan oo ku saabsan codsiga iyo adeegsiga xargahayaga.
3. Xaqiijinta tayada: 12 bilood oo dammaanad tayo leh, lacagta waa laga jari karaa ama dib ayaa loo soo celin karaa haddii ay jirto dhibaato tayo leh.
1. Waxaan haynaa qalabka tijaabada ee heerka koowaad si loo ogaado cabbiraadaha xogta kala duwan iyo xakamaynta tayada xajinta. Mar kasta oo xajmigu ay tahay in marka hore la ogaado in tayadu u qalanto iyo in kale si toos ah ayaa meesha looga saari doonaa. Markaa waxaan heli karnaa kalsoonida macmiilka weyn, waxaanan siin karnaa dhowr sano.
2. Waxaan leenahay awoodahayada R & D, si aan uga caawino macaamiisha inay xalliyaan dhibaatada aan caadiga ahayn. Waxaan sidoo kale bedeli karnaa calaamadda macaamilka sida waafaqsan shuruudaha.
3. Waxaan hubin karnaa in qiimahayadu yihiin kuwa ugu macquulsan haddii aad la barbar dhigto tayada tayada tayada ee Shiinaha. Waxaa kuu wanaagsan inaad isbarbar dhigto qiimaha iyo tayada alaab-qeybiyeyaasha dhexdooda. Laakiin qof kastaa wuu ogyahay inaadan iibsan karin alaabta tayada ugu sareysa leh qiimaha ugu hooseeya, laakiin saameynteena ayaa ah tayada ugu fiican haddii aad isticmaasho qiimo siman.
Waxaan leenahay si toos ah khadka wax-soo-saarka shiidi iyo khadadka isu-ururinta leh qalabka tijaabada si toos ah si toos ah taas oo ka dhigaysa tayada biraha saxda ah sare. Waxaan ka dhignaa timaha 100% la tijaabiyey.
Tiknoolajiyada u gaarka ah ee wareejinta qabow ee geeddi-socodka rogid taasoo wanaajisa xoogga giraangiraha iyo nolosha xajinta iyadoo si fiican loo qaabeeyey qaab-dhismeedka birta iyo birta raacda.
Iyo tignoolajiyada cusub ee nitriding ee jilicsan ee giraanta gudaha iyo dibadda iyo qafiska taasoo ka dhigaysa waxqabadka wanaagsan iyo cimriga dheer ee xajkayada.
Marka laga reebo iibka gudaha, xajinta XRL ayaa horay u dhoofisay in ka badan 120 waddan iyo gobollada dibadda oo ay ku jiraan Japan, Korea, Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam, Indonesia, Pakistan, Algeria, Saudi Arabia, Russia, Ukraine, Kazakhstan, Peru, Bolivia, Chile , Kenya, Zambia, United States, Canada, Mexico iwm.
Waxaan horey u dhignay wakiil wadamada Koonfurta Ameerika sida Peru iyo Afrika sida Kenya iyo Zambia, Hadda waxaan wali raadineynaa wakiilka astaanta XRL ee adduunka oo dhan, haddii aad wax dan ah ka leedahay, fadlan nala soo xiriir si toos ah.